Ny Cyclone na rivodoza dia andihan-drahona matevina, feno orana sy rivotra.
Rehefa mafana ny andro, dia lasa entona ny ranomasina, na ireo renirano ety antanety, ka dia miakatra eny ambony manome ny zavona sy rahona.
Mihamavesatra izy avy eo, toy ny rano miandrona eo amin'ny takobilany ireny, ka rehefa mavesatra dia miverina miraraka ety antany, izay ilay orana.
Ny rivotra mafana anefa dia mamonjy ny rivotra mangatsiaka hatrany mba ampitovitovy izany hafanana izany.
Amin'ny fotoanan'ny volana desambra-aprily anefa, ny ila-bolantany atsimo dia mitodika sy akaiky ny masoandro, ka dia mafana ny andro, ary dia malaky kokoa izany ny hanafanany ny ranomasina, ka dia betsaka ny entona miakatra, ka dia mihabetsaka ny rahona feno rano.
Amin'ny hariva anefa dia malaky mangatsiaka ny tany, satria midona aminy ny hafanana dia miverina miakatra, fa ny ranomasina kosa ela vao mafana, fa ela koa vao miverina mangatsiaka.
Midika izany fa mafana kokoa ny ranomasina amin'ny hariva noho ny ety an-tanety, ka dia ny rivotra mafana eo ambonin'ny ranomasina no mikisaka mandeha aty an-tanety hanafana ny rivotra mangatsiaka.
Eny ambony eny kosa dia midina ny tsindrin'ny rivotra, na dépression, ka dia manomboka miodina ny rivotra, force de Coriolis, ka aty amin'ny ilabola-tany atsimo dia miodina manaraka ny fiodin'ny famataranandro ny rivotra, fa mifanohitra amin'izay any ilabola-tany avaratra.
Ny cyclone izany dia andihan-drahona lehibe izay mety mahatratra 300 km na mihoatra ny savaivony, manana masony izy, na ilay ivony antsoina hoe Œil du Cyclone. Ny fihetsik'io masony io izany no andrefesana azy. Io masony io no ametrahana ny toerana misy azy.
Ankehitriny, raha ny Cyclone AVA no resahina, dia io masony io dia mbola any amin'ny 220km ny 04 janoary 2018 tamin'ny 03 ora tolak'andro. Nefa izy manana savaivo 300 km, ka dia io orana efa hitantsika io, izany hoe ny rambony 100km io efa mitsoka io, fa mbola rahampitso maraina vao tafiditra eto amin'ny sisin-tanitsika ny masony.
Arakaraky ny anatonana ny masony no mampahery vaika azy.
Marihina, fa ny faritra misy ny masony dia tsy dia misy orana firy, ka io no mamitaka, satria ny tanany havia izao io efa miditra io, avy eo tonga ny masony tsy misy orana, dia heverina fa efa lasa izy, nefa dia hiditra indray ilay tanany havanana miodina, dia taitra ny olona hoe nanao tampody fohy ilay cyclone, nefa iny anisan'ny manimba zavatra betsaka, satria efa namandoan'ny tanany havia ny trano, dia maina kely avy eo, nefa dia tsenain'ny tanana havanana dia vaky sy mirodana avokoa ny trano.
Misy karazany telo ilay hafainganam-pandeha resahina,
1- Ny hafainganam-pandehan'ilay masony, arakaraky ny mampiadana an'io hafainganam-pandehan'ny masony io, na ny fikisahan'io masony io no mampanimba zavatra betsaka azy. Teo izy raha nikisaka 20Km/ora, izao izy mihamahazo hery dia lasa 17km/ora.
Ahoana izany hoy isika, ka tsy mihatsara ve raha miadana?
Aza adino fa ny cyclone dia mivelona amin'ny rano, ka rehefa misy hafanana dia mitombo ny entona miakatra dia mihamahazo hery ny cyclone, rehefa mitombo ny rano azony, dia mihamavesatra izy ary mandeha miadana, ny rivotra entiny izany dia mihamafy satria mihamiodina mafy izy, nefa izy ela fikisaka, ka noho izany dia manampotoana betsaka izy hamotehana zavatra eo amin'ny toerana andalovany.
Toy ny tandrimo, raha miodina mafy ny tandrimo ka mijanona amin'ny toerana iray, izany hoe kely ny hafangainam-pikisahany, dia mandavaka mihitsy ilay toerana iodinany izy, fa raha mandeha aingana kosa ny fikisahany, dia tsy manampotoana animbana zavatra maro izy.
2- Ny rivotra entiny, iny ilay rivo-doza manimba izay miakatra ambonin'ny 120km/ora izy izao.
3- Tafiotra; io dia rivotra mitsoka tampoka, izay manendaka tafotrano mihitsy, izay miakatra 140Km/ora izy izao.
Asio gony misy fasika ny tafontrano, fantsiho hazo ny varavarankely mitodika any atsinanana na manolotra ny ranomasina, sokafy kely ny avy aty andrefana rehefa tena tonga ny rivotra, ampitovitovy ny tsindry ao an-trano sy ny any ivelany, mba tsy ampipoaka ny tafo na ny trano.
Asio rano madio sy sakafo ao an-trano, asio lampe torche, fanafody fiandry, vahao ny biby fiompy, ampakao toerana azo antoka, mialà amin'ny faritra iva na mety ho tondraka, mamonje toerana avo na toerana mafy, mihainoa radio, aza mivoaka loatra any ivelany, tandremo ny fil fa mety misy courant ireny latsaka ireny, aza manenjika tôle manidina.